Man United oo saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Burnley oo ay booqatay…+SAWIRRO – Gool FM
Dajiye December 29, 2019
(England) 29 Dis 2019. Manchester United ayaa saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Burnley oo ay ku booqatay garoonka Turf Moor, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-2, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 20-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester United.
Daqiiqadii 44-aad Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay xiddiga reer France ee Anthony Martial, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Andreas Pereira.
90-ka daqiiqo ee dhamaadka ciyaarta Marcus Rashford ayaa hoggaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Manchester United, waxayna ciyaarta noqotay 0-2, iyadoo uu goolkan si qurux badan kaga caawiyay Daniel James.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 0-2 ay ku adkaatay Manchester United oo marti ugu aheyd kooxda Burnley garoonka Turf Moor.